SEO: Khibrad u leh aagga 1 waxay u horseedi kartaa daciifnimo kuwa kale | BehMaster
Bogga ugu weyn/Seo/SEO: Khibrad u leh aagga 1 waxay u horseedi kartaa daciifnimo kuwa kale
SEO: Khibrad u leh aagga 1 waxay u horseedi kartaa daciifnimo kuwa kale
Ku fiicnaanta hal meel oo ka mid ah hagaajinta mashiinka raadinta waxay u horseedi kartaa daciifnimo kuwa kale. Marar badan ayaan arkay.
Haddii kanaalkaaga raadinta dabiiciga ah uusan korin inkastoo dadaalka aad ku shubeyso, dib u noqo oo qiimee inaad indho la'aan ku tahay arrinta dhabta ah. Waa kuwan saddex tusaale.
… dib u noqo oo qiimee inaad ka indho la'dahay arrinta dhabta ah iyo in kale.
Kiiska 1: Waxyaabaha Aan Gurracan
Astaan ​​caalami ah, oo si toos ah u-macmiilka ah ayaa waqti badan ku lumiyay hagaajinta waxa ku jira boggeeda ecommerce laakiin wali ma helin soo jiidashada natiijooyinka raadinta dabiiciga ah ee dhaafsiisan summada summada.
Astaantu waxay ahayd mid xooggan, laakiin awood la'aanta shirkadu inay ku wado taraafikada su'aalaha raadinta aan summada lahayn sida "katiinka dahabka" ayaa si ba'an u xaddiday dakhliga. Sida shirkado badan oo e-ganacsiyeedka, suurtagalnimada summada si ay u kordhiso waxqabadka raadinta dabiiciga ah waxay si adag u jiiftaa meesha aan summada lahayn.
Si loo beegsado weydiimahan aan summada lahayn, calaamaddu waxa ay dhigtay xaddi yar oo nuxur ah oo la hagaajiyay boggaga qaybta. Way ku filnaatay in la caddeeyo mawduuca ereyga muhiimka ah iyada oo aan khatar la gelinaynin la iftiimiyay, xoogga la saaray sawirada alaabada quruxda badan. Waxay ahayd inay caawiso waxqabadka raadinta dabiiciga ah. Laakiin ma dhicin.
Dhibaatadu waxay ahayd in boodhadhka raadinta aysan gurguuran karin boggaga qaybta la hagaajiyay. Xidhiidhada ay aadanuhu si sahal ah u gujin karaan uma shaqayn sidii isku xidhayaasha gurguurta matoorada. Xogta la hagaajiyay uma aysan jirin makiinadaha raadinta si ay u isticmaalaan oo ay u darajo qaataan.
Takhasuska SEO-ga summada ee tayaynta nuxurka ayaa ka indho tirtay dhibaatada gurguurashada ee farsamada.
Kiiska 2: Mawduuc ka kooban
Goob kale oo ecommerce ah, soo-saare iibinaya calaamadeeda dharka, ayaa si weyn ula tartamaysay shabakad iibiyeyaasha. Waxay ahayd dheelitirnaan jilicsan. Soo-saareyaashu waxay u baahdeen iibiyeyaasha dakhligooda, laakiin waxay kasbadeen xad-dhaaf sare marka ay si toos ah uga iibinayaan macaamiisha.
Xitaa marka ereyada muhiimka ah ay ku jiraan magaca astaanta, soo-saareyaashu had iyo jeer kama soo muuqan goobta ugu horreysa - booska Google sida caadiga ah (inkasta oo aan had iyo jeer ahayn) abaal-marinaha su'aalaha calaamadeysan.
Goobtu waxay ahayd qaab SEO ah oo hufan. Ma aysan la kulmin isbeddello waxqabad degdeg ah oo tilmaamaya algorithm ama dhibaato farsamo - kaliya dheer, tartiib tartiib ah, isbeddel hoos u dhac ku ah waxqabadka raadinta dabiiciga ah.
Soo saaruhu waxa uu habeeyay qoraalka boggaga alaabta ugu muhiimsan. Waxay ahayd mid sifaynaysa. Muhiimad ahaan, waxay bartilmaameedsatay mawduucyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee xiiseynaya macaamiisha. Si kastaba ha ahaatee, qoraalka la hagaajiyay ayaa sidoo kale ka soo muuqday xogta macluumaadka ee dib-u-iibiyeyaasha ka soo jiiday si ay u quudiyaan goobahooda ecommerce.
Sidaa darteed soo-saaruhu wuxuu isticmaalayay waxyaabo nuqul ah. Xogta la hagaajiyay ee ku taal goobteeda ayaa sidoo kale ku jirtay iibiyeyaasha'. Natiijo ahaan, darajada booska ugu horreeya ee dabiiciga ah ee alaabteeda waxay kuxirantahay arrimo kale, sida maamulka isku xirka, kaas oo badan oo iibiyayaal waaweyn ay lahaayeen wax badan.
Istaraatiijiyada hagaajinta bogga wax soo saarka ee wax soo saarka ayaa ka indho tirtay dhibaatada nuxurka nuqul ka mid ah
Kiiska 3: Maamulka Isku xidhka Bararka
Maamulaha goobta saddexaad ee e-ganacsiga, tafaariiqda elektaroonigga ah, waxa uu lahaa hirgelin farsamo oo meel u dhow, guul naadir ah oo laga gaaray ganacsiga ecommerce. Laakiin goobta ayaa ku dhibtoonaysay inay kaxayso waxqabadka raadinta dabiiciga ah ee alaabteeda.
Nasiib darro, diiradda tafaariiqda ee ka saarista goobta nuxurka nuqulka ah, 301 dib u habeynta URL kasta oo khaldan, iyo hirgelinta xog habaysan oo dhammaystiran ayaa ka tagay wakhti yar oo loogu talagalay dhismaha isku xirka, taas oo dhaqaajin karta irbadda waxqabadka.
Bogagga isku xirka goobta ayaa daciifay. Waxay ahayd mid aad u culus oo leh goobo aan qiimo lahayn: xoqin iyo goobo kale oo spammy ah oo ku xiran dhammaan goobaha waaweyn. Xidhiidhada ugu qiimaha badan waxay ka yimaaddeen boggaga leh mawduuca mawduuca diiradda saaraya laakiin awood yar. profile profile ay markii hore u ekaa mid wanaagsan, ka hor inta aan qoto dheer qotomin.
Goobtu may la kulmin SEO-ga xun. Dhibaatadu waxay ahayd xiriirin tayo aad u yar.
Khibradda farsamada SEO ee tafaariiqda ayaa ka indho tirtay maamulka isku xirka liita.
Waa maxay sababta ay tahay inaad tixgeliso inaad ku hayso Diiwaangelinta Domain-ka iyo Martigelinta Shabakadda Mid ka mid ah Saqafka Hoostiisa
Shabakadda Cloud Platform Network: Premium Tier vs Standard Tier